Original lesikhumba okwenziwa tag zensimbi Isikhumba Pocket for BlackBerry 8220 Pearl Flip — Everything for BlackBerry. InfoResheniya / bbry.net
Izesekeli nezingxenye zokungcebeleka zeBlackBerry‎ → ‎Izesekeli kanye izingxenye ezisele BlackBerry 8220 Pearl Flip ‎ → ‎
Original lesikhumba okwenziwa tag zensimbi Isikhumba Pocket for BlackBerry 8220 Pearl Flip
Zabuna kusukela BlackBerry inkampani. Inikeza ukuvikelwa egcwele yefoni yakho. ukubukeka Representative. It isekela ubuchwepheshe magnetic.
Original lesikhumba okwenziwa tag metal Isikhumba Pocket — uchungechunge odumile nesembozo, owethulwa omunye ngowokuqala BlackBerry onobuhle ezahlukene, kubandakanya 8220. Eminyakeni edlule, ukusetshenziswa abanikazi ezahlukene BlackBerry, lezi zimo baye babonisa omuhle izakhiwo wabo obavikelayo ukuphila isikhathi eside, futhi kwadingeka abe Classic kusukela BlackBerry inkampani.
Isembozo inzuzo ka-ekhukhwini yikhono amandla webhethri savings: kukhona inzwa magnetic ukuthi kubangelwa ngokushesha nje ifoni ivuliwe esikhwameni ngaphakathi esembozweni, ukuhlinzeka isikrini backlight futhi ikhiphedi Ilokhi. Ukuze kube lula isaziso, ungakhetha izinto ezahlukene ongazikhetha ifoni ukuba ikhale (vibration, ringtone, vibration + Ihubo), ngenkathi kwenzeka ucingo ngeke ngokuzenzakalelayo ukusebenzisa lolu hlelo akhethiwe umsindo, futhi ngaphandle kwalo — evamile.
Case has a cutout phezulu, kanye ingaphakathi bushelelezi, okwenza kube lula ukuthatha out smartphone yakho, ngaphandle ukunwaya it. Buhle sobala original lesikhumba icala nge tag zensimbi Isikhumba Pocket ngoba BlackBerry ukubukeka omele: emangalisa isikhumba esingokwemvelo ukuthungwa, amafomu laconic kanye tag lensimbi BlackBerry — logo ngekhava ezifanele zonke isitayela kanye nesimo. Uhla emelelwa imibala ehlukene.
Quality and function: genuine (authentic), case inludes magnet
Product type: Case and its accessories → Pocket case
Original lesikhumba okwenziwa tag zensimbi Isikhumba Pocket for BlackBerry 8220 Pearl Flip, Black (Black) HDW-18958-001 ●
Original lesikhumba okwenziwa tag zensimbi Isikhumba Pocket for BlackBerry 8220 Pearl Flip, Beige (Sandstone) HDW-18958-005 ●
Original lesikhumba okwenziwa tag zensimbi Isikhumba Pocket for BlackBerry 8220 Pearl Flip, Burgundy (Merlot) HDW-18958-004 ●
Original lesikhumba okwenziwa tag zensimbi Isikhumba Pocket for BlackBerry 8220 Pearl Flip, konsundu (Espresso) HDW-18958-002 ●
Black (Black) HDW-18958-001
Beige (Sandstone) HDW-18958-005
Burgundy (Merlot) HDW-18958-004
konsundu (Espresso) HDW-18958-002